Jawaari oo amar ku bixiyay inaan lacag laga bixin karin Bankiga Dhexe * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa amar ku bixiyay inaan lacag laga bixin karin Bankiga Dhexe ee Soomaaliya, inta Xildhibaanada Baarlamaanka ka ansixinayaan Miisaaniyada saddexda bilood ee sanadka 2014.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maanta loo qeybiyay miisaaniyada saddexda bilood ee sanadka 2014, iyadoo Gudiga Maaliyada Baarlamaanka marka uu soo aqriyo loo qaado doono cod, si lagu ansixiyo.
Sii hayaha Xilka Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan oo looga yeeray fadhiga Baarlamaanka ayaa ka cudur daartay dib u dhaca ku ymid miisaaniyada oo aheyd in goor hore la horkeeno baarlamaanka, isagoo sabab uga dhigay dib u dhacay is bedelkii Xukuumada hore ee kalsoonida lagala laabtay.
Waxaa uu sheegay in Miisaaniyadan ay ka ballaaran tahay miisaaniyadii hore, ee 10-ka Wasaaradood, isla markaana qorshuhu yahay in Xukuumada la ballaariyo, waxaana uu codsaday Xildhibaanada inay fududeeyaan ansixinta miisaaniyada, maadaama berri ay sanadka cusub ay kow tahay.
“Waxaa idinka codsanayaa in waqtiga yar ee aan heysano inaad sahashaan in Miisaaniyadan KMG inaad asixiysaan, idikoo tixgelinaya daruufaha jira”ayuu yiri Maxamuud Xasan Suleymaan
Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof, Jawaari ayaa sheegay in inta Gudiga Maaliyada howsha ugu dheer qabanayo ilaa caawa ay jawaab ka sugayaan, isla markaana aanay wax lacag ah sanadka cusub laga bixi karin Bankiga Dhexe Ilaa uu ka ansixiyo Baarlamaanka Miisaaniyda, “Xukuumada ma bixin karto hal shiling oo qarash ah, Bankiga wax lacag ah lagalama bixi kari, ilaa waqti kooban gudahood lagu ansixinayo”ayuu yiri Prof. Jawaari.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa marka ay soo aqristaan miisaaniyadan waxaa lagu wadaa inay codka kalsooida u qaadaan, isla markaana loo ansixiyo Miisaaniyada saddexda bilood ee sanadka cusub.